Fihetsiketsehana teny Ambodin'Isotry :: Mifampitana ireo mpivarotra sy ny kaominina • AoRaha
Filanjana sora-baventy, horakoraka sy fitsofana kiririoka no tazana sy re teny Ambodin’Isotry, omaly. Niverina nitokona indray ireo mpivarotra teny an-toerana. Tsy mbola nisy ny marimaritra iraisana teo amin-dry zareo sy ny kaominina Antananarivo renivohitra, hatramin’ny mitatao vovonana teo ho eo. An-daniny, ireo mpivarotra mibodo ny toerana manamorona ny Birao misahana ny fanadiovana (BMH). An-kilany kosa ireo tompon’andraikitra eo amin’ny tsena ao amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra(CUA) sy ny polisy kaominaly, manala an’iretsy farany tamin’iny faritra iny.
Heverin’ireo mpivarotra fa fanilihana ny fanesorana azy ireo amin’ny toerany. Tsy neken’izy ireo ny soso-kevitry ny kaominina. “Nivarotra teto efa ho am-polo taonany maro isan’andro izahay. Nahoana no esorina amin’ny toeranay nefa ny mpivarotra eny Anosy afaka maka sisiny mivarotra? Mandoa volan’ny banky, mitaiza kamboty ny ankamaroanay ireo, dia ho aiza izahay raha hoesorina eto? Mankany amin’ny Lapan’ny tanàna nefa izahay arirarira fotsiny fa tsy misy mandray”, hoy i Hanitriniaina Tantelisoa, solontenan’ny mpivarotra, omaly.
Nandà hatramin’ny farany ireto mpivarotra raha nilazan’ny tompon’andraikitry ny tsena fa hafindra any Bekiraro izy ireo.” Tsy mety aminay ny miala eto. Hiady hatramin’ny farany izahay ny hiverenana eto”, hoy indray i Joel, mpivarotra hafa. Hentitra hatrany anefa ireo tompon’andraikitra ao amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra fa tsy azo ivarotana intsony manamorona ny BMH.
“Tranon’ny kaominina Antananarivo renivohitra ny BMH. Misy marary tsaboina ato. Mila fahanginana na ny marary na ny mpitsabo. Tsy misy vahaolana fa tsy maintsy miala eto izy ireo. Azon’izy ireo atao, ohatra, ny miditra any amin’ny mpivaro-kazo sy ny sisa raha te-hiala izy ireo”, hoy ny lehiben’ny sampan-draharaha misahana ny tsena ao amin’ny CUA, izay tsy nety hitonona anarana.
Voalazan’ny solontenan’ny mpivarotra fa nifampiresaka tamin’ny tompon’ andraikitra tao amin’ny Lapan’ny tanàna izy ireo, omaly tolak’andro, saingy tsy mbola nisy ny marimaritra iraisana.
Fanodikodinam-bola sy kolikoly :: Hohadihadian’ny IGE hatreny amin’ ireo rantsamangaikan’ny Jirama
Fepetra fikarakarana faty :: Miato ny fizahana razana ao amin’ny hopitaly HJRA